စိတ်လိုလက်ရ အော်ဆိုဖြစ်သော သီချင်းများ
The Voice Weekly ဂျာနယ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်
ရွာပြန်ပြီး ဦးပဉ္ဖင်း ၀တ်လိုက်ဦးမယ်
Pause နှိပ်ထားတဲ့ ပြဇာတ်
ဒီဇင်ဘာလရဲ့ နောက်ဆုံးညမှာပေါ့ ......။
ပြက္ခဒိန်ထဲက မင်းသမီးက ပိုစတာထဲမှာ ပြုံးနေတဲ့ မင်းသမီးကို လှမ်း ပြောလိုက်တယ် ...။
“နင်တို့တွေကတော့ အသက်ရှည်လိုက်တာနော် .... ငါ့မှာတော့ မနက်ဖြန်ဆိုရင် အမှိုက်ပုံးထဲပဲ ရောက်မလား ... စက္ကူဝယ်တဲ့ ကုလားဆီပဲ ရောက်သွားတော့မလား .... မသိတော့ ပါဘူးဟာ ....”
ပိုစတာရဲ့ အပြုံးက မချိပြုံးလေး ဖြစ်သွားတယ် ....။ ပြီးတော့ ကြေကွဲသံလေးနဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို ပြန်ပြောလိုက်တယ် ...။
“ငါကတော့ .. အသက်အရှည်ကြီးနေပြီး ... လူတွေကို ဘာမှ အကျိုးမပြုတဲ့ ပိုစတာတွေထက် ... တစ်နှစ်လေးပဲ အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီး လူတွေအတွက် တစ်နှစ်လုံး အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတဲ့ ပြက္ခဒိန်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်ဟာ .....” ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:13 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (23)
“အဲဒါ ‘ဆိတ်’ ပါကွာ ....”
“ဟာကွာ ... ‘သိုး’ ပါလို့ ပြောနေတာကို ...”
‘ဆိတ်’ နဲ့ ‘သိုး’ တောင် မခွဲတတ်သေးတဲ့ အရွယ်လေးတွေပါ။ ငြင်းရင်းခုန်ရင်းနဲ့ အသံကျယ်ကျယ်လာတယ်။ ငြင်းခုန်တာလို့ ရေးနေကျအတိုင်း ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေဆိုတော့ ခုန်ခုန်ပြီးကို ငြင်းနေကြတာ။
လမ်းပေါ်က ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကိုပဲ မေးကြည့်ကြတယ်။
လူကြီးက ဖြေတယ် .....
“ဘယ်အကောင်လဲ ? .... သြော် ... ‘ဆိတ်သိုး’ ကြီးပါကွာ” .... တဲ့။
ကလေးနှစ်ယောက် စိတ်လေ သွားကြလေရဲ့ ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:30 PM
တချိန်ချိန်တော့ ရှိမှာပါ ...
အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ ကွာမယ်။
လွှတ်တင်မိခဲ့တဲ့ စွန်ကလေး ...
မိုးပေါ်ကို မြင့်တက်သွားတယ် ...
မျက်စိတဆုံး ... ငါငေးကြည့်နေတယ် ...
ငါ့ သီချင်းက မဆုံးခဲ့ဘူး။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:37 PM
မိုးတိမ်စတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား ...
ရင်ခွင်မှာ ချိတ်ဆွဲမနေဘူး ...
ငါ့ကို မလွမ်းပါနဲ့ ...
ငါ့ကို ဆက်အိပ်ခွင့်ပြုပါ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:24 PM
ညီညာသော ခြေလှမ်းများနှင့် မညီညာသော ခြေလှမ်းများ
ညီညာသော ခြေလှမ်းများသည် လှပပေမယ့် ရက်စက်ခြင်းကို ကျွန်တော် ခံစားနေရသည်။ ထို့ကြောင့် မညီညာသော်လည်း ယုံကြည်ချက်တူသော ခြေလှမ်းများနောက်သို့သာ ကျွန်တော် လိုက်မည်။ ညီညာခြင်း မညီညာခြင်းထက် ယုံကြည်မှုကိုသာ ကျွန်တော် ပို၍ မြတ်နိုးသည်။
ပွဲတော်ရက် ဖြစ်သောကြောင့် တောင်ပေါ်သို့ သွားသော စောင်းတန်းလှေကားတွင် လူစည်ကားနေသည်။
ကျွန်တော်နှင့် သူငယ်ချင်းသည် တောင်ပေါ်စေတီသို့ အရင်ရောက်သူ အနိုင်ဟု သဘောတူ၍ ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
သူငယ်ချင်းက စောင်းတန်းလှေကားမှ အခြားသူများကို တွန်းထိုးဖယ်ရှား၍ အပြေးတက်သွားလေသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ စောင်းတန်းဘေးရှိ မညီမညာ ကျောက်ခဲပေါများသောလမ်းကြမ်းမှ လှေကားမရှိ ခက်ခဲဖြည်းညင်းစွာ တရွေ့ရွေ့တက်ခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ကျွန်တော် ရှုံးနိမ့်သွားနိုင်လေသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် အနိုင်ရဖို့ တစ်ခုတည်းနှင့်တော့ အခြားသူများကို မထိခိုက်စေလိုပါ။ အခြားလူများကို တွန်းထိုး ဖယ်ရှားပြီးမှ ရရှိသော အနိုင်ကို ကျွန်တော် မလိုချင်ပါ။
ပြိုင်ပွဲ၏ ခြေလှမ်းများသည် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်နေဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
အမှောင်ထဲမှခြေလှမ်းများနှင့် အလင်းထဲမှ ခြေလှမ်းများ
ကျွန်တော်နှင့် လူအချို့က အမှောင်ထဲ၌ စမ်းတ၀ါးဝါး လျှောက်လှမ်းနေကြသည်။ အချိန်မရွေး ဆူးညှောင့်ခလုတ်တို့နှင့် တွေ့နိုင်သည်။ မမြင်မစမ်းနှင့် အသူတရာ နက်သော ချောက်ထဲသို့လည်း ကျသွားနိုင်လေသည်။ သို့သော်ကား မကြောက်မရွံ့ လျှောက်မြဲ။
အလင်းထဲမှ လူများသည်လည်း ထိုပန်းတိုင်သို့ပင် လျှောက်လှမ်းနေကြ၏။ မြင်မြင်ထင်ထင်ရှိ၍ ထိုသူများသည် ခရီးတွင်လေသည်။
အမှောင်ထဲမှလူသည် အလင်းထဲရှိ လူကို မြင်နိုင်၏။ အလင်း၌ရှိသောသူကား အမှောင်ထဲသို့ မမြင်နိုင်ရာ။
အို .... အလင်းထဲတွင် လျှောက်လှမ်းနေကြသော ညီနောင်အပေါင်းတို့ ....။ သင်တို့ မမြင်နိုင်သော်လည်း အမှောင်ထဲတွင် သင်တို့ကဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းနေသူများမှာ လျှောက်လှမ်းနေကြဆဲသာ...။
အမှောင်ထဲမှ ခြေလှမ်းများနှင့် အလင်းထဲမှ ခြေလှမ်းများ ထိုပန်းတိုင်တွင် ဆုံတွေ့ကြပေလိမ့်မည်။
ထိုအခါ အမှောင်လည်းမဟုတ် ... အလင်းလည်း မဟုတ်။
ရွှေရောင် အတိပြီးသော မြို့ပြက စောင့်ကြိုနေလိမ့်မည် တကား ။ ။
Labels: ဝတ္တုတို comments (13)
ငါတစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ ...။
အမှိုက်လို ပုံသွားတယ် ...
ငါ ယုံတဲ့ အိပ်မက်ကမ်းက
ဘယ်ဆီမှန်း မသိ ....။
ငါ ... အားရှိပါရဲ့ ... (ဒါပေမယ့်)
ဆုတောင်းမှ ရမယ်ဆိုရင် ....။
....... ရပ်နေခဲ့ပါရစေတော့။ ။
(တချိန်က နာကျင်စွာ ကျောခိုင်းခဲ့သော ကျောင်းတော်ကြီးသို့ ...)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:27 PM
လူတစ်ယောက်သည် ကြယ်ကြွေသွားတာကို ကြည့်ရင်း တွေးတွေးဆဆနှင့် သူ့ဘေးမှ အဖော်အား စကား စ လိုက်သည်။
“တကယ်လို့ကွာ ... ကြယ်ကြွေတဲ့ အချိန်မှာ ... မင်းဆုတောင်းသမျှ ရမယ်ဆိုရင် ... မင်းဘာကို အရင် ဆုတောင်းမလဲ ?”
အဖော်လုပ်သူက စဉ်းစဉ်းစားစားနှင့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
“အင်း ... တကယ်သာ ရမယ်ဆိုရင် ... ပထမဆုံး နောက်ထပ် ကြယ်အစင်း တစ်ရာလောက် တစ်ခုချင်း ကြွေပါစေလို့ ဆုတောင်းမှာပေါ့ကွ” ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:10 PM
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။
မိုးမစိုချင်ပဲနဲ့ကို ရွှဲခဲ့ရ ...။
ငါ့ကို အရွဲ့တိုက်လိုက်ပုံများ ပြောပါတယ် ....။
ကံတရားက မျှတပါဦးမလား ?
ငါ .. လဲကျ ကျန်နေရစ်ဦးမှာလား .... ပြောပါ ? ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:11 PM
ရွာပြန်တော့မလို့ နှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့ လာပါတယ် ဆိုမှ တက်ဂ်ထားတာနဲ့ တွေ့နေရတယ်။ ရွာပြန်မှာက ကြာမှာဆိုတော့ နှင်းဟေမာ ရဲ့ တက်ဂ်ကို ချက်ချင်းပဲ ရေးပေးရင်း တလက်စတည်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်က အဆိုတော်ရူးဆိုတော့ အားအားရှိ သီချင်းတွေပဲ အော်ဆိုနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ ပျင်းတဲ့အခါ အော်ဆိုတယ်။ သင်္ချာတွက်တဲ့ အခါ အော်ဆိုတယ်။ မူးတဲ့ အခါ အော်ဆိုတယ်။ ကြုံတုန်း ကျနော့် ရိုက်ပေါက် အကြောင်း ပြောပြဦးမယ်။ တခါက ကျနော့် သူငယ်ချင်း အဖေ ဆုံးလို့ အသုဘအိမ်မှာ ထုံးစံအတိုင်း သင်္ချာတွက်ကြပါတယ်။ ဖဲရိုက်တာကို ပြောတာနော် :-) သောက်လိုက် ရိုက်လိုက် မိုးအလင်းဆိုတော့ သန်းခေါင်ကျော်တော့ ကျနော် မှန်ပါပြီ။ ဖဲလေးနိုင်တော့ စိတ်ထိန်းမရတော့ပဲ ကျနော့်ဗီဇအတိုင်း အားလုံးကို မေ့ပြီး သီချင်းအော်ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ ရှိသမျှလူ အကုန် အံ့သြတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ ဘေးက သူငယ်ချင်းက သတိပေးမှပဲ ကျနော် အသိပြန်ဝင်သွားတယ်။ အဲလိုကို ရူးတာ ... ရိုက်ပေါက် ... သူများ အသုဘ အိမ်မှာ သီချင်းအော်ဆိုတဲ့ကောင်။
ကျနော်က ရော့ခ် ခရေဇီဆိုတော့ ဆိုတတ်တဲ့ သီချင်းတွေကလည်း IC ရဲ့ သီချင်းတွေပဲ များပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကိုတော့ နားပဲ ထောင်တတ်ပါတယ်။ မဆိုတတ်ပါဘူး။ ကျနော်စိတ်ထဲကပါပြီး အမြဲ အော်ဆိုနေတတ်တဲ့ သီချင်းကတော့ လေးဖြူရဲ့ ထွက်ပေါက် သီချင်းပါပဲ ....
ဆူးတောထဲ ရောက်သွားတဲ့ ငါ့ရဲ့ ညခရီး ရှေ့သို့ မတိုးနိုင်တဲ့ အထိ ...
ရှုံ့ချတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ မင်းကို ကြည့်ချင်သလား အပြစ်တို့ မတွေ့နိုင်တဲ့ အဆုံး ....
ဘာကို ရှာရှာမရတယ် .... အားလုံးဟာ ပိတ်ဆို့ဆဲ ....
ထွက်ပေါက်များ ပိတ်ကာထားတယ် ... မိုးလင်းသွားလည်း ဘာထူးလဲ ...
ပြီးတော့ ကြယ်စင်များရဲ့လမ်း ....
ရှင်သန်လာခဲ့ကြရ ... ရှည်ကြာတဲ့ ဂတိများကြား ...
နာကျင်စွာ ခြောက်လန့်ခဲ့တဲ့ ဒီညတွေရဲ့ကြား ......
နာကျင်စွာ ကျောခိုင်းခဲ့တယ် .... ကျောင်းတော်ကြီးရယ်
(အဲဒီနေရာရောက်ရင် ကျနော် နာနာကျင်ကျင် အော်ဆိုတတ်မြဲပါ)။
နောက်တစ်ပုဒ်က လေးဖြူရဲ့ ဧရာဝတီညများ ...
ဧရာဝတီရဲ့ စကားပြောသံ ... ရင်ခုန်နေတဲ့ သက်ရှိ မြစ်တစ်စင်း
နာကျင်စွာနဲ့ ညည်းတွားသံ ဒီအချိန်မှာ မင်းကြားသိနိုင်ပါစေ ...
အတိတ်တွေ မပျောက်ကွယ်ပါ ... အသက်ရှင် မြစ်ရေလိုစီး ...
ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်း ... အနာခံ ပေးဆပ်ခြင်း .....
ဧရာဝတီညများ .... စီးဆင်း ......
(အဲဒီသီချင်းကို ကျနော် တင်ဖူးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်)။
ရေးရရင်တော့ ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ဂစ်တာတီးရင်း ကျနော် မှန်လာပြီဆို ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ အော်ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ထူးအိမ်သင်ရေးပြီး မွန်းအောင်ဆိုခဲ့တဲ့ ... အရေးကြီးပြီ ညီနောင် အပေါင်းတို့ ... သွေးစည်းကာ ညီစေ ညီကြစို့ ... ငါတို့ရဲ့ သမိုင်းတစ်ခေတ်ကို ငါတို့ သွေးနဲ့ ရေးခဲ့သည် ... သွေး သစ္စာနဲ့ ပြုခဲ့သည် ဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ သီချင်း။
နောက် ကျနော် ရွှတ်နောက်နောက် ရေးထားတဲ့ လူကြီးလာမည် ဆိုတဲ့ သီချင်း ...
လူကြီး လာပါမယ် ... ပန်းအိုးတွေ ထားထားပါ ...
လူကြီး လာပါမယ် ... အမှိုက်တွေ လှဲထားပါ ...
လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းများ .. ဆေးတွေ သုတ်ပြီးပလား ...
လမ်းဘေး ဈေးဆိုင်များ သိမ်းလေ ... သိမ်းကြပါ ...
လူကြီး မျက်စိနောက်မယ် ... လမ်းတွေ ရှင်းထားပါ ...
(အဲဒီသီချင်းကို နောက်ကြုံရင် ကျနော် အရင်ကလိုပဲ ခြင်ထောင်ချ အသံသွင်းပြီး တင်ပါ့မယ်)။
ဒီလောက်ပါပဲ။ ပြောရရင် ကျနော်အော်ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေက ခံစားချက် ရှိရင် ရှိသလို ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း နှလုံသားရှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက် ချစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါဆိုလည်း နူးညံ့တဲ့ အချစ်သီချင်းလေးတွေ ညည်းနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုတော့ မရေးတော့ပါဘူးဗျာ။ တော်ကြာ ဒီကောင် ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ နွဲ့ နေပြန်ပြီလို့ ပြောခံရမှာ ကြောက်လို့ပါ။ နှင်းဟေမာရေ ဒီလောက်ပဲနော်။ အချိန်မရလို့။ ကျေနပ်ပေးကြပါ။ မကျေနပ်လည်း ကျေနပ်ပေးကြပါ။ (ဒါတောင် အများကြီးဖြစ်သွားတယ်)။
ကဲ ခု .. ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ရွာပြန်တော့မှာကြောင့် အွန်လိုင်း လောကနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ပါမယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း ဘလော့ဂ် လည်ခြင်းများကို ခေတ္တ ရပ်နားထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ကျနော် ပြန်လာမှာပါ။ တစ်လကြာရင်ကြာမယ်။ တစ်သက်လုံးကြာချင်လည်း ကြာနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က Tag ပို့စ်နဲ့ လိုက်အောင် ရေးရရင် ဟေမာနေ၀င်း သီချင်းလိုပေါ့ဗျာ။
ဘယ်အချိန် သေမှာကို ကြိုမသိကြတဲ့ ဘ၀မှာ ...
ကြိုတင်ရေးထားတဲ့ နှုတ်ဆက်သီချင်း ....။
ခွဲခွာနေရတဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာ ကျနော် သေချင်လည်း သေသွားနိုင်တယ်လေ။ အနိစ္စ အမြဲမရှိတဲ့။ ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ဆန့်သောလက် မကွေးမီပေါ့။ အဲဒါများ သေရင် နင်ဘယ်လို ပြန်လာမှာလဲလို့ မေးချင်တယ် မဟုတ်လား။ ကျနော်ပြန်လာမှာပါ။ သေရင်တောင် နောက်ဘ၀ကျ ရောက်အောင် ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။ ဘလော့ဂ်လောကကြီးကို ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့် ..........။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:40 PM
သော့ခလောက်တစ်ခုကို မြစ်ရေထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
“ဟေ့လူ ... သော့ခလောက် အကောင်းကြီးဗျာ ... ဘာလို့ လွှင့်ပစ်ရတာလဲ ...?”
“ဟာ ... အဲဒါဆိုလည်း သော့တုလုပ်ပြီး သုံးလို့ ရတာပဲ .. နှမျှောစရာကြီး ...”
“ဟုတ်တယ် ... ဒါပေမယ့် ကျနော် သော့ခလောက်နေရာက ၀င်စဉ်းစားမိလို့ပါ ...”
“ဗျာ ... ဘယ်လို ..?”
“ကိုယ့်ကို သော့တုနဲ့ ဖွင့်ပြီး အသုံးချ ခံရတာထက် ရေထဲခုန်ချပြီး သတ်သေလိုက်တာက ပိုကောင်းတယ်ဗျ ...”
ပြောပြီး အပြုံးစစ်စစ်တစ်ခုနဲ့ သူ့ကို ပြုံးပြရင်း ကျွန်တော် လှည့်ထွက် လာခဲ့တယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:49 PM
ကြောင်တောင်တောင် နိုင်နေတဲ့ ကောင်အတွက်
လောကမှာ မာယာမဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကလည်း
အသည်း ခွဲတတ်သတဲ့ ... ။
ဘ၀ဆိုတာ .. အဆိပ်ကို
မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားတတ်ဖို့ လိုတာပေါ့။
တရားနဲ့သာ ဖြေပါတော့ကွယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:02 PM
(အဲဒီမှာ တယ်လီဖုန်း တစ်လုံး ရှိတယ် ...။)
ကျောင်းပိတ်ခါနီး ဂီတသံတွေက ခွဲခွာခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်တချို့လည်းဖြစ်ရဲ့။ အလွမ်းတိမ်တိုက်မဲမဲတွေ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ရဲ့ အနောက်တောင်ထောင့်ဆီကနေ ထစ်ချုန်းသံမပေးပဲ တိတ်တိတ်လေး ၀င်ရောက်လာနေပြီလေ။ ဟုတ်တယ် ... မကြာခင်မှာ နှလုံးသားရှိသူတိုင်းရဲ့ ရင်ဘတ်ဆီ အလွမ်းမိုးရေစက်တွေ တဖွဲဖွဲ ရွာသွန်းလာလိမ့်မယ်။
"ကျောင်းက တစ်လပဲပိတ်မှာပါ ... ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် ပြန်တွေ့ကြရမှာပဲ"
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကျောင်းပိတ်ချိန်တစ်လဟာ တစ်ကမ္ဘာလောက်ကြာတယ်ထင်ရတဲ့အကြောင်း သူသိသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ သစ်သီးချိုလေးက အရာတိုင်းကို ခပ်ပေါ့ပေါ့နေတတ်တယ်။
ကျွန်တော် စက္ကန့်တိုင်း သူ့ကို လွမ်းနေမယ့်အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောတယ်။ ကျွန်တော် ငေးကြည့်နေရင်းနဲ့ ဇူလိုင်လမှာ စက္ကန့်ပေါင်း နှစ်သန်းခြောက်သိန်း ခုနှစ်သောင်းရှစ်ထောင့်လေးရာ ရှိကြောင်းကို မပြောလိုက်မိဘူး။
အဲဒီကာလက နာရီတွေ ဆိုးခဲ့ကြတယ်...။ သူငယ်ချင်းလည်းမက ချစ်သူလည်းမကျတဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခွဲခွာချိန်ဟာ အေးစက်စက်နဲ့။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ထိတ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ မရက်စက်လိုက်ပါနဲ့ ကံကြမ္မာရယ် ...။ အလွမ်းတွေ မီးလောင်ရင် ဘယ်ဆောင်းမှ နှင်းကျတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
"ငါ သတိရရင် ဖုန်းဆက်မှာပေါ့ဟာ ... နင်သာ ဘယ်မှမသွားနဲ့"
(အဲဒီမှာ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်...။ အဲဒီ တယ်လီဖုန်းဘေးမှာ မိုးရေတွေ ရွှဲနေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ငုတ်တုပ်ထိုင်နေတယ်။)
ဖုန်းဘေးမှာ စောင့်နေရင်း ကျောင်းပိတ်ခါနီး ဂီတသံတွေ ပြန်မြင်နေမိတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အချိုမြိန်ဆုံး သစ်သီးလေးတစ်လုံးရဲ့ စကားသံ ချိုချိုလေးကို ပြန်လည်စားသုံးမိတယ်။ စိတ်ကူးထဲမှာပေမယ့် အရသာက သိပ်မကွာလှပါဘူး။
အဲဒီစကားလေးတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်မှာ ပီတိတွေဖြစ်လို့။ နယ်မြို့လေးဆိုတော့လည်း ဟန်းဖုန်းတွေ ဘာတွေလည်း မရှိ။ အိမ်က တယ်လီဖုန်းလေး နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက 'ငကြောင်' တဲ့။ မင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ငါဟာ ကြောင်ရုံတင်မကဘူး၊ အတော်လေးကို ရူးသွပ်နေသူပါ သစ်သီးချိုလေးရယ်။
လွမ်းလိုက်တာ ကောင်မလေးရေ ...။ ဖုန်းလာရင်တော့ အလွမ်းရဲ့ ခါးသီးမှုတွေကို စကားသံချိုလေးတွေက အနိုင်ယူသွားကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
[အိပ်မက် = "မင်းကိုကြည့်ရတာ သနားလိုက်တာကွာ ... ထမင်းလည်းမစား၊ ရေလည်းမသောက်ပဲ ငါ့ဘေးမှာချည်း ထိုင်စောင့်နေတယ်။ သွားပါ ... အေးအေးဆေးဆေးနေပါကွာ ... အရင်ကလည်း ဖုန်းလာရင် ငါလှမ်းအော်နေကျပဲ"
ဖုန်းဘေးမှာ အမြဲထိုင်စောင့်နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို သနားသွားလို့ထင်တယ်။ ဘေးက တယ်လီဖုန်းက ကရုဏာအပြည့်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။
"အခုလာမယ့်ဖုန်းက ငါ့ဘ၀ရဲ့ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ဖုန်းကွ၊ ဘယ်သူဘာပြောပြော ငါကတော့ ဆက်စောင့်ရမှာပဲ ... ဘာမှ လာသနားမနေနဲ့"
ရုတ်တရက် ဒေါသထွက်သွားတဲ့ တယ်လီဖုန်းက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောလိုက်တယ် ...
"နေပေါ့ကွာ ... ငါက စေတနာနဲ့ပြောတာကို၊ ဒီပုံအတိုင်းသာ မင်းဆက်စောင့်ရင် မင်းသေလိမ့်မယ်"
"ဟား ဟား ငါမသေခင် ငါ့သစ်သီးချိုလေးဆီက ဖုန်းလာမှာပါကွ ... မင်း စောင့်ကြည့်"]
ဒီလိုပါပဲ ... ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က အိပ်မက်ထဲအထိ တယ်လီဖုန်း စောင့်နေတာပါ။ သူသတိရတဲ့အခါ ဖုန်းလာလိမ့်မယ် ထင်တာပဲ။ သစ်သီးချိုကောင်မလေးရေ ...။ ငါကိုက ယုံကြည့်လွန်းပါတယ်ကွယ်။
အလွမ်းတွေကလည်း အုံ့မှိုင်းနေတာ ကြာပါပြီကော။ နေမင်းကြီးလည်း အရှေ့ကနေ အနောက်ကို လျှောက်နေလိုက်တာ ခဏခဏပဲ။ အင်္ကျီအနီလေးတောင် အလွမ်းတွေနဲ့ စိုရွှဲလို့။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ညမရှိတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
ကောင်မလေးရေ ...။ ငါ့နှင်းဆီခင်းတွေ ခြောက်သွေ့ကွဲအက်တော့မယ်ကွဲ့။ ယုံကြည်မှုတွေ တစစ ပြိုကျ။ ငါ့နှလုံးသားဟာ ရိုးပြတ်တွေထဲမှာ ကန်ခံရတဲ့ ဘော်လုံးတစ်လုံးလို နာကျင်ကြေမွလို့။ ငါရင်ခုန်ရတာ ခါးလွန်းတယ်ကွယ်။
မျှော်လင့်ချက် နဲနဲလေးတွေနဲ့ပဲ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်။ လမင်းကြီးလည်း ကမ္ဘာကို တစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပတ်ဖို့ အရှိန်ယူကောင်းတုန်း။ မိုးတွေကလည်း ထစ်ချုန်းသံ ပေးတလှည့် မပေးတလှည့်နဲ့ သည်းသည်းမည်းမည်း။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖုန်းဆက်စောင့်တုန်းပေါ့။ ဖုန်း ... ဆက် ... စောင့် ... တုန်း .... ။ ။
(ဇာတ်လမ်းကလေးကတော့ ဒါပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းမဆုံးလိုက်ဘူး မထင်ပါနဲ့။ ဇာတ်သိမ်းသွားပါတယ်။ ဇာတ်ပေါင်းတော့ ... သစ်သီးချိုလေးဆီက ဖုန်းမလာပါဘူး။ အဲဒီမှာ တယ်လီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်း အဲဒီဇာတ်လိုက်ဟာ ဖုန်းစောင့်ရင်း အညောင်းမိပြီး အစာအိမ်မှိုတက် သေသွားပါသတဲ့ ...။
သြော် ... ပြောရဦးမယ် ...
အဲဒီမှာ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်။ အဲဒီ တယ်လီဖုန်းက မကြာခဏ ကလင် ကလင် နဲ့ ထ ထ မြည်နေတတ်လေရဲ့ ...။)
ခပ်ညံ့ညံ့ ပန်းတစ်ပွင့်ရယ်ပါ ...။
ကြွေကျ သက်ဆင်းမိတာပါပဲ ...။
ငါ့ရဲ့ ... အဖြူရောင် လေ(ပြည်) လှိုင်း ရေ .....။
ကမ္ဘာမှာ အာဒံနဲ့ ဧ၀မတွေ့ခင်
နင်နဲ့ငါ အရင်တွေ့ကြမယ် ... ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:47 PM
စိတ်လည်း မကူးခဲ့ပါဘူး ... ။
ငါက ... အမှောင်မှာ
လူစုန်းတစ်ကောင်ပါ ... ။
မိုးရွာလို့လည်း ရေခံဖို့ မေ့နေသူပါ။
တိမ်လိုက်စီးချင်တဲ့ ကောင် ...
ယိုင်နဲ့စွာ ရပ်လို့ ... ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:28 PM
Labels: ကဗျာ comments (20)
The Voice Weekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများနှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲချက်ပေါင်းများစွာကို စာရေးသူတို့ ရရှိခဲ့ပါသည်။ “နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူလူထုမပါလို့ မရဘူး။ ပြည်သူလူထုမကြိုက်တဲ့ အယူအဆကို ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ ဘယ်မှ မရောက်ဘူး။”ဟု ပြောဆိုမှုများ ရှိပါသည်။
အမှန်အားဖြင့် The Voice Weekly တွင်ဖော်ပြနေသော နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးအားလုံး၏ ပထမဦးစားပေးရည်ရွယ်ချက်မှာ Rule of the game ကို ရှင်းပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး ရေခံမြေခံ ပေးထားချက်ကို ကြည့်လျှင် Rule of the game ကို ပြည်သူလူထုက ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမဟုတ်ပဲ Guardian ဖြစ်သူ တပ်မတော်က ပြဋ္ဌာန်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးတို့၏ထုံးစံအတိုင်း Game Plan ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်သာသည်ဖြစ်ရာ စာရေးသူတို့က မည်သို့သော Rule of the game ဖြစ်သည်၊ မည်သို့သော Game Plan ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ရှင်းလင်းတင်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ Game Plan သည် ‘စနစ်ပြောင်း၊ အုပ်ချုပ်သူမပြောင်း’ ဖြစ်ကြောင်း ‘စာဖတ်သူများသို့’ ဟု အမည်ပေးထားသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ (ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့် ရနေသေးသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။)
ပို၍ရှင်းအောင်ပြောရလျှင် စာရေးသူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေကို ပေးထားချက်အဖြစ် ကောက်ယူ၍ ပြည်သူများ ဤ Rule of the game အတိုင်း ကစားရလိမ့်မည်။ မည်သို့သော Game Plan ရှိနေသည် ဆိုသည်များကို အခြေအနေပေးသရွေ့ ရှင်းလင်းတင်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Rule of the game ကောင်း၏၊ ဆိုး၏၊ တရားဝင်၏၊ မ၀င်၏၊ ပြန်လည်၍ Review လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့် Justify(အဆုံးအဖြတ်ပေးနေခြင်း) လုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။
စာရေးသူတို့တွင် Justify လုပ်ရန် အခြေအနေမရှိသကဲ့သို့ လက်တွေ့ကျသည်ဟုလည်း မထင်မိပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရလျှင် စာရေးသူတို့သည် ဘာသာပြန်ဆရာများသာ ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်ရေးစာရေးဆရာနေရာကို ယူနေခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဝေဖန်ရေးဆရာအချို့က စာရေးသူတို့ကို ဝေဖန်ရေးဆရာအမှတ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုမပါသော နိုင်ငံရေးဖြစ်သွားလျှင် ပဋိပက္ခများ နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ ရှည်ကြာသွားနိုင်သောကြောင့် Rule of the game အကြောင်း ပြည်သူလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြရန် ကြိုးစားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားညီလာခံကိစ္စကို ဥပမာအဖြစ် စဉ်းစားလျှင် စာရေးသူတို့ နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ရေးအချိန်များကို ဖြုန်းပစ်လိုက်ရန် မသင့်တော်ကြောင်း သင်ခန်းစာ ယူသင့်ပါသည်။ ယခု အခြေခံဥပဒေကို စာရေးသူတို့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့လျှင် ယနေ့ Rule of the game သည် ယခုထက်ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါလိမ့်မည်။
ယခုတစ်ပါတ် The Voice Weekly ဂျာနယ် Vol.5/No.36 ပါ ဆရာအောင်ထွဋ်ရေးသားသော ဘာသာပြန်ဆရာနှင့် ဝေဖန်ရေးဆရာ အမည်ရှိ ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖတ်မိသမျှထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှပေးချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆရာအောင်ထွဋ်ကို အသိမပေးပဲနဲ့ (ဘယ်လို ဆက်သွယ် အသိပေးရမလဲ မသိတဲ့ အတွက်) ဆရာနားလည် ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဂျာနယ်ကို ရှာဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:57 PM
Labels: ဗဟုသုတ comments (0)
အရမ်း အပျင်းထူတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို အဖေက ဆုံးမပါတယ် ...။
“လောကကြီးမှာ နာရီလို နေစမ်းပါ သားရယ်...”
ပညာရှိစကားလိုလို ... ပညာရှိလေသံလိုလို နဲ့ပါ...။
ကျွန်တော်ကလည်း သိပ်မခေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ သူ့ ပညာရှိလိုလို လေသံစကားကို နားလည်ပါတယ်။ နာရီတွေက အချိန်တိုင်း မရပ်မနား အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ ...။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်ကလည်း သိပ်မခေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ဘယ်ရမလဲ ... ပြန်ပြောလိုက်တယ် ...
“ဟာ ... နာရီလိုတော့ မနေချင်ပါဘူး အဖေရာ ... ဆယ့်နှစ်နာရီပြည့်တိုင်း အစကနေ ပြန်ပြန် စ နေရမှာပေါ့ ...”
ကျွန်တော့်အဖေ ပညာရှိကြီး မျက်မှောင်ကုတ်သွားပါတော့တယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:52 PM
ဒီလ ဒီရက် ဟာ ...
ကိတ်မုန့်ကို ဓားနဲ့ လှီးလိုက်တယ်
ဖြောင်း .. ဖြောင်း ...... ဖြောင်း .. ဖြောင်း ...။
ဟတ်ပီး ဘတ်ဒေး ... ဟတ်ပီး ဘတ်ဒေး ...
အားလုံးကို ပြောမယ် ...
ပျော်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ ...
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ။
ငါ့ဘေးမှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ ။
ပုံမကျ ပန်းမကျ နဲ့
ဘယ်က စ လို့ ဘယ်ကို သွားရမှန်း မသိ။
စလစ် ဖြစ်ပြီး ဘီးတွေ မရွေ့တော့တာ။
အမှားတစ်ရံကို စီးပြီး ထွက်ခဲ့တယ် ...
ဘယ် .. ညာ .. ဘယ် .. ညာ ...။
ငါ့အတွက် ... ငါ့အတွက် ... !
တစ်နေ့တစ်လံ တစ်နေ့တစ်လံ နဲ့
ပုဂံကတော့ ဘယ်မှ မရွေ့ဘူးပေါ့ ...
သူ့နောက်ကျောမှာ ဝေးကျန်ရင်း ...
..... ..... ဝေးကျန်ရင်း ..... ...... ။ ။
မပြန်ခင်လေး ဖတ်ဖို့ တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မကြာခင် ကျွန်တော် ပြန်လာပါ့မယ်။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:14 PM
သင်္ကြန်လည်း ကျတော့မယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ရွာပြန်ပြီး ဦးပဉ္ဖင်း ၀တ်လိုက်ဦးမယ်။ တစ်နှစ်ခြား နှစ်နှစ်ခြားတော့ ၀တ်ဖြစ်ပါတယ်။ သံသရာအတွက် တစ်နှစ်တစ်ခါ ကောင်းတာလေးတွေ လုပ်ပါဦးမယ်။ ဒီအတိုင်းနေရင် ငါးပါးသီလတောင် လုံအောင် မနည်းထိန်းနေရတာ။ မလုံမိတာ များပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ သူရာမေရိယပေါ့ ဟား ဟား။
ဒုလဘ္ဘ ၀တ်ဖြစ်ရင်တော့ ကျွန်တော် တကယ် တရားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၀တ်နေကျကျောင်းမှာ တရားစခန်းရှိတယ်။ အဲဒီမှာ နေ့ဆွမ်းစားပြီးရင် တရားသွားထိုင်ပါတယ်။ ည တရားစခန်း ပြီးတဲ့ အထိပေါ့။
လာလည်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများကို သာဓုခေါ်နိုင်ကြစေဖို့ အသိပေးရင်း ခဏ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
အားလုံး အေးချမ်းကြပါစေဗျာ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 9:28 PM
လည်ချောင်းထဲမှာ တစ်ခုခု နင်နေပုံရတဲ့ လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ် ...
“တစ်ခုခု နင်နေတာပဲ ... ဘာစားမိလို့လဲ?”
လူနာက စကားမပြောနိုင်ပါဘူး။ သူနဲ့ ပါလာတဲ့ အဖော်လူနာရှင်ကပဲ ပြန်ဖြေပါတယ် ...
“ဘာမှမစားပါဘူးခင်ဗျာ ... ဒီလိုထင်ပါရဲ့ ... ပါးစပ်နဲ့ မဆန့်တဲ့ စကားလုံးတွေ ပြောမိလို့ ထင်ပါတယ် ဒေါက်တာ ...”
“ဗျာ! ... ဘာ .. ဘာတွေများ ပြောမိလို့လဲ?”
အဲဒီလူနာရှင်ကပဲ ပြန်ဖြေပါတယ် ...
“ က .. ခ .. ဂ .. ဃ .. င .. တဲ့ ..... A .. B .. C .. တဲ့ ..... + .. - .. x .. တဲ့ ..... X .. Y .. Z .. တဲ့ ..... ဋ .. ဌ .. ဍ .. တဲ့ ..... အဲ ... တဲ့ .. အဲ့ အဲ့ .. အု .. ၀ု .. ”
ပြောရင်း ပြောရင်း နဲ့ အဲဒီလူလည်း လည်ချောင်းနင်သွားပါတော့တယ်။ ။
ဒီဝတ္တုတိုလေးနဲ့အတူ ၄.၉.၂၀၀၈ တုန်းက တင်ခဲ့တဲ့ ၀တ္တုတိုအဟောင်းလေးကို ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
သူရော ကျွန်တော်ပါ လဲကျ။ ဒေါသတကြီးနဲ့ ကျွန်တော်ဆဲမလို့ ကြည့်လိုက်တော့... ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုဝင်တိုက်တာ လူမဟုတ်ပဲ ပါးစပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။
“ဆောရီးဗျာ... နောက်က ကျွန်တော့်သခင်လိုက်လာလို့ ထွက်ပြေးနေတာပါ ...”
ကြည့်လိုက်တော့ ဟိုးခပ်ဝေးဝေးမှာ ဒီဘက်ကိုပြေးလာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ အဲ... ဟုတ်တယ်ဗျ ...သူ့မှာ ပါးစပ်မပါဘူး။
“နေပါဦး... မင်းကဘာလို့ လူပေါ်မှာမနေပဲ ထွက်ပြေးနေ ရတာလဲ ?”
“အို... အဲဒီလူပေါ်မှာ မနေချင်တော့ပါဘူးဗျာ ... ဘယ့်နှယ် ... လူကဖြင့် အဖြစ်မရှိပဲနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ လျှောက်ပြောနေတာ.. ကြာတော့ သူမရှက်ပေမယ့်... ကျွန်တော်ရှက် လာပြီဗျ”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲ ပါးစပ်ကြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:43 PM
ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ကြောက်လန့်တကြား စူးစူးဝါးဝါး အော်လိုက်သံပါ။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ? ငါ ဘာ ကူညီရမလဲ ??”
ကယ်တင်ရှင် တွေ့ပြီဆိုပြီး ငှက်ကလည်း ၀မ်းသာ အားရနဲ့ ...
“ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လေတွေ နည်းသွားပြီဗျ ... လုပ်ပါဦး ... ကျွန်တော်တို့ ပျံရတာ သိပ်အားမပါဘူး ဖြစ်နေတယ် ...”
“အင်း ... ဟုတ်ပြီ ... ငါက လိုတရ နတ်မင်းကြီးပဲ ... ကဲ ... အဲဒီတော့ မင်းဘာဖြစ်ချင်လဲ?”
“လေတွေ အများကြီး ဖန်ဆင်းပေးပါ အရှင်!”
“ဖြစ်ပါတယ် ... !!”
အမှန်ကတော့ လိုတရနတ်မင်းကြီးဆိုပြီး ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မာရ်နတ်ပါ ...။ လေတွေအများကြီး လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီး မာရ်နတ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့ ငှက်ကတော့ ....
လေမုန်တိုင်းထဲမှာ ဒလိမ့်ကောက်ကွေး မျှောပါသွားလေရဲ့ ....။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 9:09 PM
အဲဒီ စားကျက်မှာ သွားကျောင်းရတာ အမော။
နွေကို ပူလွန်းလို့ ရှောင်ပြေးခဲ့တယ်
ခိုလှုံမိတဲ့ အခန်းက ငရဲဖြစ်နေပေါ့ ...။
ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့လမ်းက ခါးတယ် ...။
ငါ့အတွက် အဖြေတွေ ရှိနေလိမ့်မယ် ...။
လမ်းဆုံရောက်ရင် ဘယ်သွားရမလဲ ?
ရောက်ရောက်လာတတ်တာ ငါ့ဘ၀ပေါ့ ...။
တကယ်ဆို နွေက ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူး
ခြေလှမ်း စ မယ်ပြင်တိုင်း ဇာတ်သိမ်းကို ကြိုတွေးမိရင်း
........... မောတယ် .........။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:44 PM
ပထမသူခိုး ။ ။ “တောက် ! မနေ့ညက ငါထွက်ခိုးနေတုန်း ငါ့အိမ်သူခိုးဝင်သွားတယ် ... ခိုးထားတာလေးတွေ ပြောင်ရော ...”
ဒုတိယသူခိုး ။ ။ “တောက် ! မနေ့ညက ငါထွက်ခိုးနေတုန်း ငါ့အိမ်သူခိုးဝင်သွားတယ် ... ခိုးထားတာလေးတွေ ပြောင်ရော ...”
တတိယသူခိုး ။ ။ “ တောက် ! ........ ...... ။ ..... ..... ။ ..... ..... ။ ..... ..... ။ ..... ..... ။ ..... ...... ။ ..... ..... ”
စတုတ္ထသူခိုး ။ ။ “ တောက် ! ........ ...... ။ ..... ..... ။ ..... ..... ။ ..... ..... ။ ..... ..... ။ ..... ...... ။ ..... ..... ”
ပဉ္စမသူခိုး ။ ။ “ တောက် ! ..... ..... ..... ။ ..... ..... ..... ”
ဆဌမသူခိုး ။ ။ “ တောက် ! ..... ..... ..... ။ ..... ..... ..... ”
မနက်မိုးအလင်းမှာ ကြားရတဲ့ မကျေမနပ် ရေရွတ်သံ တချို့ပါ။ ဘယ်သူခိုးအိမ်ကို ဘယ်သူခိုးဝင်ခိုးလည်းတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်တောင် ကိုယ့်အကြံနဲ့ကိုယ် ရှုပ်လို့ ........
“ ဒီနေ့ည ဘယ်အိမ် ၀င်ခိုးရရင် ကောင်းမလဲ??? ” ။ ။
(ပုံလေးက aliyasking.wordpress.com ကပါ။)
ကွက်လပ်လေး ဖြစ် ကျန်ရစ်တယ်။
နာရီလေးပဲ လွဲတာပါ ...
ရက် လ လေးပဲ လွဲတာပါ ...
တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပုပ်သိုးသွားခဲ့ပြန်ပြီ မေမေ...။
အစက ပြန် က ခွင့်ရရင်တောင်
ကံကြမ္မာနေရာက နေမယ် ...
ဇာတ်သိမ်းခန်းက စ ပလိုက်ချင်တော့တယ်... ။ ။
တောဘုရင်ခြင်္သေ့ကြီးက တောင်ကုန်းထိပ်ကနေ အော်လိုက်တယ် ...
“ငါ့တောအုပ်ထဲက သားရဲတိရစ္ဆာန်များ အဆင်ပြေကြရဲ့လား ?”
သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ပြိုင်တူဖြေလိုက်သံနဲ့အတူ တောဘုရင် ခြင်္သေ့ကြီး ကျေနပ်သွားတယ်။
“အဆင်မပြေပါဘူး . . . ကယ်ပါဦး !”
“အရှင်ကယ်ပါ . . . ဒုက္ခရောက်လွန်းလို့ပါ !”
တိရစ္ဆာန်ကြီးတွေရဲ့အောက်က ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေက အားကိုးတကြီး အော်ပြောကြတယ်။ အကောင်သေးတော့လည်း အသံမကျယ်နိုင်ဘူးပေါ့ ...။
တောင်ထိပ်ပေါ်က တောဘုရင်ကြီးကတော့ မကြားဘူး ...။ မြင်လည်းမမြင်ဘူး။ ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ သူ့တောအုပ်သူ ကျေနပ်နေလေရဲ့။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:26 PM
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က အမေတို့နဲ့ ဇာတ်ပွဲလိုက်ကြည့်ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ပြဇာတ်ကနေတဲ့ အချိန်ကိုရောက်လာတော့ ကျွန်တော် အရမ်း အိပ်ချင်နေပြီ။ လူတွေ ကြပ်ကြပ်နဲ့ လှဲအိပ်လို့မရတော့ အမေ့ကို ပူဆာမိတယ် ...
“အမေ ... ပြန်ကြပါစို့ ... အိပ်ချင်လှပြီ”
ဇာတ်ပွဲကြိုက်တတ်တဲ့ အမေက မပြန်ချင်သေးလို့ ကျွန်တော့်ကို ချော့ပါတယ် ...
“ခဏလေးပါသားရယ် ... မိုးတောင်လင်းတော့မယ် ... မိုးလင်းရင် ပြန်တာပေါ့ ... အဲဒီတော့မှ သားစိတ်ကြိုက် အိပ်ရမှာပေါ့ ...”
စင်ပေါ်မှာ ပြဇာတ်ကနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း သူတို့ဇာတ်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်း ကပြ သရုပ်ဆောင်နေတုန်း။ ကျွန်တော် အမေ့ကို ထပ်မေးလိုက်တယ် ...
“မိုးက ဘယ်တော့ လင်းမှာလဲ???”
“ဒီပြဇာတ် ဇာတ်သိမ်းရင် လင်းမှာပေါ့ ...”
သူတို့ကနေတဲ့ဇာတ်ဆိုတာ သူတို့ဇာတ်သိမ်းမှ ပြီးမှာပေါ့။ ကျွန်တော်မယုံပါဘူး။ မိုးက တကယ်လင်းပါ့မလား။ ကျွန်တော်ကတော့ အိပ်ချင်လှပါပြီ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:56 PM
Labels: ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ရေးတဲ့စာ comments (6)
မျက်လုံးဖွင့်ရက် အိပ်ပျော်နေခဲ့ ...။
ယောက္ခမကား ၀င်ငွေ မနည်းဆိုပဲ
ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ ငါ့ ယောက္ခမတော့ မွဲလိုက်တာချာလို့ ...
ပြင်သစ်တွေ ဒီတစ်ခါတော့ သိက္ခာကျပြီတဲ့
အီဖယ်မျှော်စင်ကြီး ပြိုကျလို့လား ?
ဒီလိုပါပဲ လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးလာလိုက်တာ ...
ငါ အိပ်ပျော်နေတာ နေ့လည်ခင်းမှတ်လို့ ...
မသိခြင်းထဲမှာ ငါတကယ် အိပ်ပျော်သွားတာပါ။ ။
(၂၀၀၂ က ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ အခုချိန်မှာတော့ ဘာတွေရေးထားမှန်း မသိနိုင်တော့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ကဗျာတွေထဲမှာ သက်တမ်းအတိုဆုံး ကဗျာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက လတ်တလော ခံစားချက်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာပါ။ ပြန်ဖတ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘာတွေရေးထားတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:07 PM
ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးရှိ ဈေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြဲ ရှိတတ်သော အရူးတစ်ယောက်နှင့် ကျွန်တော် ခင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောသောကြောင့် ကျွန်တော်သည်လည်း အရူးတစ်ယောက်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုအရူးနှင့် တွေ့ရသည့်အခါများ၌ သနားသဖြင့် ပိုက်ဆံလေး၊ မုန့်လေးများ ပေးတတ်သောကြောင့် အရူးက ကျွန်တော့်ကို မှတ်မိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအရူးသည် ယခင်ကတော့ ရိုးရိုးအရူးဖြစ်ပါသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင်တော့ ပို၍ ရူးသွားသည်ဟု ပြောရမလား၊ ရှယ်ရူးသွားသည်ဟု ပြောရမလားမသိ။ ယခုအခါ ထိုအရူးသည် စစ်ဗိုလ်ရူး ရူးနေပါတော့သည်။
တနေ့တ၌ ထိုအရူးထိုင်နေသော ပလက်ဖောင်းရှေ့ကလမ်းတွင် စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာပါသည်။ ထိုစစ်ဗိုလ်သည် လမ်းဘေး၌ ဗိုက်ဆာ၍ အိပ်နေသော ခွေးပိန်မလေးတစ်ကောင်အား အကြောင်းမဲ့ ကန်ကျောက်သွားရာ ခွေးပိန်မလေးခင်မျာ တဂိန်ဂိန်အော်၍ ပြေးထွက်သွားပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်လိုက်သော အရူးမှာ စစ်ဗိုလ်အား အာဂ သတ္တိခဲကြီးဟူ၍ အထင်တွေ စွတ်ကြီးသွားပါတော့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ထိုအရူးသည် စစ်ဗိုလ်ရူး ရူးပါတော့သည်။
တစ်နေ့က ထိုအရူးနှင့် ကျွန်တော်တွေ့ပါသည်။ မည်သူပေးသွားသည်မသိ။ အရူးလက်ထဲမှာ ကလေးကစားစရာ သေနတ်တစ်လက် ရောက်နေပါသည်။ စစ်ဗိုလ်ရူးလက်ထဲ သေနတ်ရောက်နေသဖြင့် မဲမဲမြင်ရာ ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့်နှင့် လိုက်ပစ်နေပါတော့သည်။
ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ အပစ်ရပ်ပြီး ပြုံးပြနေပါသည်။ အရူးပေမယ့် သူ့ကို မုန့်ကျွေးသူကိုတော့ မှတ်မိနေပါသည်။ ကျွန်တော် ထိုအရူးကို စချင်လာသောကြောင့် ပြောလိုက်သည်....
“ဟာ ဗိုလ်ကြီး ... သေနတ်တွေ ဘာတွေနဲ့ပါလား၊ ကျွန်တော် ခဏ ကိုင်ကြည့်ချင်လို့ ပေးစမ်းပါဦးဗျ”
အရူးသည် သေနတ်ကို ကျောနောက်သို့ ၀ှက်လိုက်ရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လက်ကာပြကာ ....
“နိုး နိုး ... လူကလေး ... ဒါတော့ မပေးနိုင်ဘူးကွ၊ ငါ့သေနတ်က နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်ဘူး၊ သန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သေနတ်ကွ”
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ လျှောက်ပြောနေသော အရူးကို ကြည့်ကာ ကျွန်တော် ရယ်ချင်သွားပါသည်။
“ဟုတ်လား ... ဒါဆို ဗိုလ်ကြီးသေနတ်က သန်းရွှေသေနတ်ပေါ့”
“အေး ဟုတ်တယ်ကွ၊ သန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သေနတ်ဆိုတော့ မင်းပြောသလို သန်းရွှေသေနတ်လို့ပဲ အလွယ်ခေါ်ပေါ့ကွာ”
အရူးက အလာကြီးပဲ။ အလွယ်ခေါ်ပေါ့ကွာတဲ့။ ရုတ်တရက် အရူးက ပလက်ဖောင်းပေါ် မှောက်အိပ်ချကာ အော်လိုက်သောကြောင့် ကျွန်တော်ပင် ကြောင်ပြီး လန့်သွားပါသည်။
“လူကလေး ... ၀ပ် ၀ပ် ... ဟိုမှာ ရန်သူတွေလာပြီ ... ဒိုင်းညှောင့် ကဲကွာ ဒိုင်းညှောင့်”
လမ်းပေါ်မှ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူများကို ကြည့်ကာ မြင်မြင်ရာ လိုက်ပစ်နေပါတော့သည်။
“ဟာ ... ဗိုလ်ကြီးကလည်း အဲဒါ ရန်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျ၊ ပြည်သူတွေပါ”
“ပြည်သူလည်း ငါ့အတွက် ရန်သူပဲကွ၊ ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့်”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ ဟုတ်ပါပြီ ... ရော့ရော့ မုန့်စားဦး ကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမယ်”
ကျွန်တော် စားလက်စ ဘီစကွတ်မုန့်ထုပ် အကျန်လေးကို ပေးပြီး ထိုအရူးနားမှ ထွက်လာခဲ့ပါတော့သည်။ ဘ၀ပေး ကုသိုလ်ကံ မကောင်းသောကြောင့် စိတ်မမှန်ပဲ ရူးသွပ်နေရှာသော ထိုစစ်ဗိုလ်ရူးအား ကျွန်တော် အလွန်သနားပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့လည်း ကျွန်တော်တို့မြို့သို့ ရောက်ခဲ့လျင် သနားစရာ ထိုအရူးအား ဘီစကွတ်မုန့်ထုပ်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်လေးဖြစ်ဖြစ် ပေးခဲ့ကြစေချင်ပါသည်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:39 PM